Hannaanka axsaabta Koonfur Afrika - BBC News Somali
Hannaanka axsaabta Koonfur Afrika
Cabdifitaax Ibrahim CAGAYARE BBC Somali
6 Maajo 2014
Image caption Doorasho hore oo ka dhacday Koonfur Afrika
Waddanka Koonfur Afrika, maalinta berri ah ayaa loo dareerayaa doorashadii 5-aad tan iyo markii uu dalkaasi ka tallaabsaday midab kala soocii.
Haddaba waa sidee hannaanka axsaabta ee dalkaasi Koonfur Afrika, saameyn intee la eg ayuuse leeyahay xisbiga talada haya ee ANC? Dadkuse sideey ku xushaan xisbiga ay taageeraan?
Koonfur Afrika waxaa ka jira hannaanka axsaabta badan, oo 13 xisbi ayaa ku jira baarlamanka dalka.
Xisbiga African National Congress (ANC), waa xisbiga haysta aqlabiyadda, oo waxa uu doorashadii ugu dambeysay ku guulaystay 264 kursi oo ka mid ah 400 ee kursi ee uu ka kooban yahay baarlamanka Koonfur Afrika.
Sidoo kalana xisbigu waxa uu maamulaa 8 gobol oo ka mid ah 9-ka gobolka ee dalka, waa markii laga reebo gobolka Western Cabe, ee uu aqlabiyadda ku guulaystay 2009-kii xisbiga Democratic Alliance (DA).
Axmed Dawlo, oo ah aqoon yahan Soomaaliyeed kana faalloodo siyaasadda Koonfur Afrika, ayaa inooga warramay axsaabta siyaasadeed ee Koonfur Afrika “Axsaabta siyaasada ee haatan ka jira Koonfur Afrika, waxaa la oran karaa waa hal xisbi oo aad u da’ weyn oo taageero fara badan haysta oo misana caan ah, iyo axsaab yaryar oo aad u tira badan.”
Haddaba xisbiga ANC, oo hadda jira in ka badan 100 sano ayaa ah kan ugu caansan Koonfur Afrika.
Waa xisbiga u horseeday Koonfur Afrika madax bannaanida, waxaana hoggaamiye u ahaa ninkii dalka sida weyn looga jeclaa ee Nelson Mandela.
Waxaa tan iyo sanadkii lasoo dhaafay hoos u yara dhacday sumcadda xisbiga, taasoo qeyb ahaan loo sababeeyay laba arrimood:
Waa mida hore ee, malaayiin dollar oo ah lacagta dowladda oo uu xisbigu ku bixiyay guri gaar uu u leeyahay Madaxweyne Jacob Zuma, oo looga dhisay deegaanka Nkandla.
Waa midda labaadee, sidii ay ciidammada ammaanka ula dhaqmeen shaqaalihii dibad baxa ka dhigayay deegaanka macdanta laga qodo ee Marikana, kuwaas oo in ka badan 30 qof ay boolisku ka dileen.
Image caption Koonfur Afrikaan codkooda dhiibanayo
Balse waxaa la saadaalinayaa in xisbiga ANC, uu doorashadan ku guulaysan doono.
Haddaba muxuu heerkan ku gaaray xisbiga ANC? Waxaan su’aashaas waydiiyay Maxamed Axmed Sheekh JABUUTI, oo wax ku bartay waddankan Koonfur Afrika, goob joogna u ahaa doorashadii hore “ANC-du waa xisbi aad iyo aad u gaamuray, oo dadkuna ay u tiirinayaan wax alaale iyo wixii horumar ahaa ee midab takoorka looga baxayay in uu qeyb weyn ka soo qaatay, xisbiyada la tartamaya ee hadda loolanka kula jirana ka tiro ahaan iyo taageero ahaan intaba lama dheeliyi karaan, waxay kaloo haystaan taariikh dheer oo dadku in fara badan ay gocanayaan oo ay markaa ugu suurtagalinayso in ay kaga weynaadaan labada xisbi ee kale ee doorashada kula jiro.”
Xisbiga loolanka adag ku haya ANC waa Democratic Alliance, waana kan ugu weyn mucaaradka Koonfur Afrika, waxaana la filayaa in uu boqolkiiba 23 ka helo codadka doorashada soo socota.
Xisbigan ayaa ku xoogan gobolka Western Cape, waxaana la saadaalinayaa inuu codad badan ka heli karo gobolka Gauteng iyo caasimadda Johannesburg.
Haddaba qofka caadiga ah ee Koonfur Afrika muxuu ku xushaa xisbiga uu u codeynayo? Axmed Dawlo ayaan waydiiyay “Wax walba waxa ay ku saleysan yihiin midab, qofka madowga ahi waa ay adag tahay in uu u codeeyo xisbi cadaan ah, cadaankuna waxa ayba la tahay in uu hoos isu dhigay in uu xisbi madoow ah uu u codeeyo, marka axsaabtu waxa ay ku saleysan yihiin horta midab iyo isir, xisbigan ANC-du marka waxa uu dheer yahay axsaabta kale waa xisbi ka da’ weyn, 100 sano iyo ka badan buu jiraa, taariikho fara badan bey soo mareen, isbadelo fara badan, shan jeer ayaa si rasmi ah loo badalay dastuurkiisa oo dhan.”
Xisbiga Economic Freedom Fighters (EFF), waxaa madax ka ah ninka dhalinyarada ah ee horray uga tirsanaan jiray ANC, waa Julius Malema.
Xisbiga ayaa tartan adag ku jira ANC, oo waxaa taageeraya dad horray uga tirsanaan jiray ANC, balse uu la go’ay Malema.
Haddaba yey taageero ka haystaan labadan xisbi ee DA iyo EFF? Maxamed Axmed Sheekh JABUUTI, ayaa ka jawaab celinaya “Taageerayaasha xisbiga DA waxa ay u badan yihiin dadka waxbartay ama da’da yar oo halgankii looga gudbayay midab takoorku aanu sameyn oo aan dhib badan u soo marin, fikirka ay ku duulayaanna uu yahay in musuq maasuqa la joojiyo oo wax walba loo maro sida uu nidaamka uu yahay, taasoo ay u badan tahay in dad badan in ay ugu codeeyaan, halka xisbiga EFF-tu uu iska yahay xisbi loo abuuray si xamaasad ku saleysan, waxa ay ku duulayaanna ay tahay in la qeybinayo hantidii dalka, beerihii la qeybinayo, fikirkaas oo ay in badan u riyaaqayaan dadka shaqo la’aanta ay saameysay.”
Guddiga doorashada ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in 17-kii Maarso ay is diiwaan galiyeen 33 xisbi siyaasadeed oo u tartami doona doorashooyinka baarlamanka qaran iyo doorashooyinka xubnaha sharci dejinta ee gobollada.